"Ny fitahian’i Jehovah no mampanankarena, ary tsy azon’ny fisasarana ampiana izany." Ohabolana 10:22
"Fa fantatrareo ny fahasoavan’i Jesosy Kristy Tompontsika, fa na dia nanankarena aza Izy, dia tonga malahelo noho ny aminareo, mba hampanankarena anareo ny alahelony." 2 Korintiana 8:9
Anisan’ireo mpanankarena indrindra teto an-tany ity lehilahy ity. Ny tena nahafantarana azy dia ny fikatsahany fatratra ny laza sy harena, ny fitondrantenany hafahafa, ary ny fitiavany lanonana sampontsampona. Maty tao anaty torimaso izy, noho ny aretim-po. Fitaratra tamin’ireo mpangoron-karena nahomby izy, ary vao avy nankalaza ny faha-70 taonany.
Ny Baiboly dia mitantara lehilahy mpanankarem-be iray, izay afa-po tamin’ny fahombiazany, ka nitoky tamin’ny harenany. Hoy anefa Andriamanitra taminy: “Ry adala, anio alina no halaina aminao ny fanahinao, ka ho an’iza izay zavatra noharìnao?” (Lioka 12:20). Nalaina tampoka taminy ny ainy ny alin’io. Tsy niantehitra afa-tsy tamina fahafinaretana mandalo izy, ka nanadino an’Andriamanitra, Izay manana ireo harena maharitra mandrakizay, dia ny fitiavana, ny famelan-keloka, ny fiadanana, ny fiainana mandrakizay, atolony maimaimpoana noho ny sorona nataon’i Jesosy Kristy teo amin’ny hazofijaliana.
Tsy ny vola ihany no irin’ny olona hananana, mba hahafa-po azy. Ary inona koa moa no mba dikan’ny vola e? Matetika Jesosy no nampisongadina ny maha tsinontsinona ny harena angonintsika etỳ an-tany, ka nitaona antsika hihary harena any an-danitra (Matio 6:19-20; Lioka 16:13). Jesosy, na dia manankarena aza satria Andriamanitra, dia niaina tao anaty fahantrana, mba hampanankarena antsika amin’ny zava-tsoa omen’ny fitiavany.
Zavona ihany ny fiainantsika eto an-tany, miseho vetivety, dia levona (Jakoba 4:14). Aoka tsy holanilaniantsika fotsiny izany, amin’ny fikatsahana zavatra maro tsy maintsy hilaozana! Jesosy no manolotra ho antsika ny fiainana mandrakizay.
FPVM Fiombonana Tsarahonenana, mirary soa hoanao